Imwe yemabhenefiti ekudonhedza vamiririri inopa kune vanodonhedza varidzi vezvitoro kunetsekana-isina kuongororwa kuongororwa.
Kuongorora kwechigadzirwa ndiyo nzira yekuona kuti zvigadzirwa zvinosangana nematanho nezvinodiwa. Maitiro ekuongorora chigadzirwa anonyanya kunetseka nekutarisa chimiro chechigadzirwa, chimiro, uye musimboti mashandiro, uye zvinowanzoitwa kufekitori uko chigadzirwa chako chakagadzirwa.
Tisati tatumira kuwanda kwenhamba kumatura edu, timu yedu yekutengesa kuFulfill Panda inova nechokwadi chekuti fekitori irikutitumira mifananidzo yezvigadzirwa.
Maitiro ekuongororwa kweyekutanga anotanga kamwechete kupinda kwehuwandu hwehuwandu hwakatemerwa kubva pakupa hesera inosvika
CHII CHINOITIKA MUDZIMAI REKUONGORORA?
Muchengeti wekuverenga anotarisa muzvinyorwa zvinotumirwa nemutengesi panguva iyi. Anotarisa pasuru yacho uye ovhura imwe neimwe panguva kuti ave nechokwadi chekuti huwandu hwezvinhu zviri mubhokisi rega rega zvinoenderana nekutenga.
Iyewo bvunzo kuti uone kana iwo mafoto echigadzirwa achienderana nezvinhu izvo zvakatumirwa.
Kurema kwacho kunoenderana nezvinotaurwa nechigadzirwa? Kana iko chaiko huremu hwechigadzirwa hwakasiyana nezvido zvechigadzirwa zvinopihwa nemutengesi, sisitimu yacho inoshandurwa.
Pane chero chinhu chiripo here? Chero mutsauko, kungave kushomeka kana kuwanda kweanouya zvinyorwa zvinonzi zvidzokere kumutengesi kutevedzera.
Pane humbowo here hwechinetso? Izvi zvinoshanda chaizvo kune zvisiri-zvakajairika zvinhu zvakaita sebhatiri rinoshandiswa kana zvemagetsi zvinhu. Ongororo isingaenzaniswi inoitwa kuti uone kana vari kushanda nemazvo sezvavakatarirwa.
Ndeipi mamiriro ekunze ekurongedza?
Kusvikira zvigadzirwa zvarongedzwa uye bundling, ese aya mabasa anopedzwa panguva yeinowanikwa yekuongorora nhanho.
Isu tinoita zvese zvatinogona kupa yakanakisa nhumbi kune yako iri kukura E-commerce kambani nekuti bhizinesi rako ndiro bhizinesi redu.
Hatife takaburitsa vatengi vako pasi. Zvakare, isu tinonyatsotora mitoro pamusoro pemirairo kubva kune vamwe.
Unogona kuvimba nesu!
Taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo!